MACLUUMAADKA MAGAALADA chite Dhismaha naqshadaha magaalooyinka ☆ Metalco ☆ Bellitalia
MAGACA MAGAALADA MAGAALADA
MAGACA MAGAALADA MAGAALADA - waxaan nahay wakiilka kaliya ee shirkadaha Talyaani ee suuqa Polish:
METALCO • Bellitalia • MAGAALADA MAGAALADA
Waxaan ku martiqaadeynaa dhammaan qeybaha daneynaya inay nala shaqeeyaan istuudiyaha dhismaha i naqshadeeyayaasha, si toos ah anaga ama khadka tooska ah Ururka Dhismaha Muuqaalka Dhulkawaxaan nahay xubin taageersan.
Waxaan sidoo kale kugu casuumeynaa xaruntayaga cusub ee ku yaal Warsaw at ul. Fort Służew 1b / 10 taariikh ahaan, mid gaar ah Fort 8.
Waa halkaan in kulammo iyo shirar loogu talagalay shuraakadeenna iyo macaamiisheenna iyada oo kaqaybqaadashada naqshadeeyayaasha Talyaani ah la abaabuli doono.
Birta - waa shirkad Talyaani ah oo la aasaasay 1984.
Shirkaddu sidoo kale waxay ka tirsan tahay kooxdan Bellitalia i MAGAALADA MAGAALADA.
Guusha ganacsiga ee METALCO waa natiijada baaritaanka joogtada ah iyo khibradda la xiriirta naqshadeynta, iskaashi lala yeesho naqshadeeyayaasha iyo naqshadaha ugu fiican, iyo adeegsiga teknoolojiyadda iyo agabyadii ugu dambeeyay.
Wax soo saarka METALCO waxaa lagu gartaa qaab shaqsiyeed iyo naqshad, taasoo, marka lagu daro tayo fiican leh, lagu kala saaro suuqyada adduunka. Dhamaan wax soo saarka iyo geedi socodka farsamada waxaa loo fuliyaa si ixtiraam leh mabaadiida cilmiga deegaanka iyo ilaalinta deegaanka.
Waxaan kugu casuumeynaa iskaashiga.
Bellitalia waa shirkad Talyaani ah, oo qayb ka ah kooxda METALCO, oo la aasaasay 1962.
Waxay soo saartaa walxaha qaab dhismeedka magaalada dhammaan noocyada wax la taaban karo ee la taaban karo, PDM, HPC, UHPC, granite iyo wadar marmar, iyo sidoo kale lahaansho iyo shati XIRIIRKA UU SAMEEYA.
Waa shey ceyriin kacaan oo kuu ogolaanaya inaad abuurto nooc kasta oo xoog aad u sarreeya iyo cimri dheeri.
Waxay caan ku tahay uruurinta qaaska ah dheriyo ubax i kuraasta, kuraasta leh cabbir aan caadi ahayn, oo miisaankoodu ka badan yahay 3,5 tan iyo qaab quruxsan oo ah daruuriga dabiiciga ah ama marmar.
Waxaa si guul leh loogu iibiyaa adduunka oo dhan sida badeecado u gaar ah sababa la xiriira geedi socodka farsamada iyo qaabeynta.
Naqshadeynta Magaalada waa shirkad Talyaani ah oo lagu soo daray Kooxda Metalco ku xigta BELLITALIA.
Waxay dhameystiraysaa dalab ballaaran ee laba shirkadood oo walaalo ah.
Waa shirkad da 'yar oo uruurinteeda ay samaysteen naqshadeeyayaal da' yarta ah, kuwaas oo siiya fikrado hal abuur leh ururintooda, iyagoo qayb weyn ka ah wax soo saarka waayeelka, waayo-aragnimada khibradaha leh ee ka socda Metalco.
Waxyaabaha ay soo saartaa waa kuwo aad u badan oo la awoodi karo iyada oo la ilaalinayo qaabeyn weyn, tayo iyo cimri dheer.